အိုကေလူသစ်တွေ၊ ဒါတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်၊ နားထောင်၊ နားထောင်ပါ၊ မထွက်ပါနှင့် - Your Brain On Porn
အိုကေလူသစ်တွေ၊ ဒါတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်၊ နားထောင်၊ လူတက်၊
သင် noFap ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်သင်သည်ပထမ ဦး ဆုံးသီတင်းပတ်ကုန်လွန်သွားသောသံသရာ၌မှီဝဲနေသည်ဟုခံစားရသော '1wee' ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒီဟာကိုရေးချပါ
ဒါဟာစူပါပါဝါမယူပါဘူး 90day ယောက်ျားတွေမှာမင်းမှာမရှိတာတစ်ခုခုရှိတယ်ဆိုတာမင်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောရင်မင်းကလိမ်နေတယ်။ ငါတို့အားလုံးမှာလိင်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုတွေရှိတယ်၊ ငါတို့အားလုံးမှာကာတွန်းကားအရုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်၊ ငါတို့အားလုံးဟာ porn လို့လူသိများတဲ့ပလတ်စတစ်လိင်အယောင်ဆောင်မှုကိုနှစ်သက်ကြတယ်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်လူသားဖြစ်ကြ၏။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမလှည့်စားပါနဲ့ သင်ကြည့်ရှုရန်အတွက် porn galleries များကိုကြည့်ရှုရန်နည်းလမ်းမရှိပါ။ porn သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အတူလက် -gooey-hand အမြဲလမ်းလျှောက်။ သင်တစ် ဦး ပြုလုပ်လျှင်သင်တစ် ဦး ကိုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ လည်း edging ကိုရပ်တန့်။ မရေမတွက်နိုင်အောင်ချည်မျှင်များသည်ဤအချက်ကိုသက်သေထူသည်။ မင်းရဲ့လိင်တံက“ နည်းနည်းလေးလေ” လို့အော်ပြောတယ်။ တက် clam ရန်ကပြောပါ။ ပြီးတော့ pushups လုပ်ပါ။
ခေါင်းစဉ်အပေါ်နေစဉ်: ဟုတ်ကဲ့, pushups ။ သင်ဘယ်လောက်လေ့ကျင့်ပါသလဲ သင် fapping ကိုရပ်တန့်ရန်ရည်ရွယ်ပါကစွမ်းအင်မြှင့်ရန်အဆင်သင့်ပြင်ပါ။ သင်သည်သင်၏အားနည်းနေသောဒစ်မှသင်၏ဘဝဖျော်ရည်ကိုညှစ်ထုတ်။ မရသောကြောင့်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝသောစွမ်းအင်များတည်ဆောက်ရန်သွားသည်။ အဲဒါကောင်းပါတယ် အခုသင်ဘာလုပ်မလဲ။ အဲဒီစွမ်းအင်ကိုအားကစားခန်းမထဲ၊ ရွှင်လန်းမှုသို့သွားရန်သို့မဟုတ် ole pushups ကိုစီစဉ်ပါ။ ဝါသနာကိုစတင်ပါ၊ လက်မှုပညာကိုသင်ယူပါ၊ လမ်းလျှောက်ပါ။ စသည်ဖြင့်အလုပ်များပါ။ အာလူးတစ်မျိုးဖြစ်ခြင်းကသင့်အားရှေ့သို့မတက်စေပါ။
အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုနှင့်သင်တစ်ပြိုင်တည်းကြုံတွေ့ရနိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ငါကကြုံတွေ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကဒီဖော်ပြရန်။ ညဥ့်နက်နက်မှာ ၀ က်ဘ်ကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုနေမိတယ်။ ပျင်းရိငြီးငွေ့လာသောအခါဘာဖြစ်သွားသည်ဆိုတာကိုမှန်းဆကြည့်ပါ။ Porn သင်၏အွန်လိုင်းအချိန်ကိုလျှော့ချပါကသင်ကိုယ်တိုင်သာကူညီနိုင်သည်။
စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည့်ယောက်ျားများသည်အကြီးအကျယ်တိုင်းတာသည်။ အဘယ်သူမျှမအရှက်ကွဲခြင်းရှိပါတယ်။ ဒီရူးသွပ်မှု PMO ကင်းမဲ့မှုကိုသင်ဘယ်လောက်ဆိုးရွားချင်ပါသလဲ သင်ဘာပေးမလဲ ထွက်သွား? ယောက်ျားအချို့သည် iPads များကိုအိပ်ရာပေါ်သို့ တင်၍ 'browse the net' လုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းညစ်ညမ်းမှုကိုစတင်ကြည့်ရှုကြသည်။ Yikes, ဘယ်လိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲ သင်ကိုယ်တိုင်အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုနှင့်နီးကပ်စွာနေခြင်း၏နူးညံ့သိမ်မွေ့မှုကိုပေးသောအခါသင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်သည်။ သင်၏ခရီးစဉ်ကိုသင်၏အခန်းထဲရှိလက်ပ်တော့ပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်သင့်လက်ထဲရှိတက်ဘလက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ရပါကအခြားအခန်းနှစ်ခုလုံးမှထွက်ခွာရန်ရွေးချယ်ပါ။ တစ်စုံတစ် ဦး အားဝိုင်ဖိုင်စကားဝှက်ပြောင်းရန်တောင်းခံပါ။
ဒီနေ့ကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ရက်ပေါင်း ၉၀ မှတ်တိုင်ပြီးစီးရန်ကျန်ရှိသောအခြားနေ့များအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့။ သင်တစ်နေ့လျှင်တစ်ရက်သာအာရုံစိုက်သင့်သောကြောင့်သင်သည် DAY ONE တွင်အမြဲရှိနေသည်။ 90 နာရီ -bits ထဲမှာယူပါ။ PMO အခမဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်ရန်ယနေ့ရွေးချယ်ပါ။ မနက်ဖြန်သည်ယနေ့သင်လုပ်သောတူညီသောရွေးချယ်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်ရွေးချယ်သည်။
၎င်းသည်လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှုနှင့်အလိုရှိဆုံးအလိုအလျောက်လိုအပ်သည်။ ရလဒ် တစ် ဦး လူနေမှုပုံစံစတဲ့ပြောင်းလဲမှု၌တည်၏။ PMO ကိုနောက်ပြန်လှည့်ရန်အခြားသူများသည် 'အံ့သြဖွယ်' ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အပြောင်းအလဲအချို့ကိုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့ကို 'လိုအပ်သော' လို့ခေါ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရလဒ်ကတော်တော်ကောင်းတယ်။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့တခြားနေရာတွေမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမတာပိုကောင်းတယ်ဆိုတာသတိထားမိတယ်။ ပြင်းထန်သော PMO ဒုဒုဥက္ကfrom္ဌမှလွတ်မြောက်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏ဘဝပုံစံ၏အလုပ်၊ အလုပ်၊ ကျောင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်ခဲ့သည်။
ဤလောကရှိအရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပ်သည်။ လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်တိုက်တွန်းမှုများပျောက်ကွယ်မသွားပါ။ သငျသညျစဖွင့်လျှင်, အလယ်၌သို့မဟုတ်အဆုံးကျော်လွန်။ နေပါစေသတိထားရမယ်။ စမတ်နေပါ။ သင်၏ဒစ်နှင့်မသေချာပါစေနှင့်။
သင်ရှုပ်ထွေးနေလျှင်အရှုံးမပေးပါနှင့်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရွေး၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံမည်မျှစိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်ကိုအသံကျယ်ကျယ်ထုတ် ပြော၍ ဆက်သွားပါ။ ပြီးနောက်… .see အမှတ် # 1 ။
အဆိုပါ စစ်မှန်သော အရာဖြစ်ပါသည် တိုးမြှင့် ပလပ်စတစ်ညစ်ညမ်းသောအရာထက်အဆများပိုကောင်းသည်။ မင်းကိုချစ်ဖို့၊ မင်းကိုချစ်ဖို့၊ မင်းကိုချစ်ဖို့၊ သူမအားလုံးကိုပေးဖို့လိုတာတွေအားလုံးဟာမင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးကိုလက်ခံခြင်း၊ နင်နွေးထွေးစွာနမ်းနမ်းခြင်း၊ မင်းကိုနူးညံ့စေခြင်း၊ သူမမျက်လုံးထဲမှိတ်ကြည့်လိုက်သည်။ သူမခဏတာအော်ဂဇင်ထက်ကျော်လွန်ချင်နေသည်ကိုသင်ရိုးရိုးသားသားနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သည်။ မင်းကသူ့ကို cum session တစ်ခုထက်ပိုပြီးလိုချင်သည်။ သင့်ရဲ့ဒစ်ကအမြဲတောင်းဆိုတာထက်ပိုပါတယ် သူမမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း၊ သူမမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အပြာကြယ်တစ်ပွင့်မရှိပါ။ သင့်အားသူမအားတစ်ခုလုံးအဖြစ်တန်ဖိုးထားကြောင်းနှင့်သင်၏ဒစ်ကိုထည့်သွင်းရန်အပေါက်တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ကြောင်းကိုသဘောပေါက်ရန်သင့်အားနွေးထွေးစွာရောင့်ရဲစေနိုင်သည်။ PMO သည်သင်၏အာရုံကိုသေစေပြီးသင်၏ ဦး နှောက်ထဲရှိသူများနှင့်စတင်ပြီးသင်၏ချစ်သူနှင့်အဆုံးသတ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့်ဂျွန်ဒင်းဗားအနေနှင့်ဤအတိုင်းအတာနှင့်အညီပြောခဲ့သကဲ့သို့၊ သင့်ရဲ့အာရုံတက်ဖြည် သစ်တော၌ရှိသောညဥ့်အခါ၊ နွေကာလ၌တောင်ကဲ့သို့၎င်း၊
ကျနော်တို့အတူတူဒီယောက်ျားတွေပါတယ်။ အခြားယောက်ျားတွေကဒါကိုလုပ်ပြီးပြီ၊ ငါလုပ်ပြီးပြီ၊ ပြီးတော့မင်းကလင်းနို့နဲ့လာလိမ့်မယ်၊ မင်းဒါကိုရိုက်နိုင်တယ် မှ porn ၏အတုချိုင်းထောက်ကိုအသုံးပြု။ ရပ်တန့် ခံစား လူယောက်ျားကဲ့သို့။ အချိန် be လူတစ်ယောက်။
TL; DR: အချက်များ 1 မှတဆင့် 10 ။
တူညီတဲ့ချည် - အခြားပို့စ်မှအဖြေ
ဒါမှန်တယ် - သင်အခုထိလုပ်ခဲ့သမျှသောကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုမစွန့်လွှတ်ပါနှင့်။
သငျသညျအချည်းနှီးသောလူခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ဗလာ ဒါကြောင့်ဖြုန်းတီး။
သင့်ကိုကြီးမားတဲ့ရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုပေးဖို့တိုက်တွန်းပါရစေ။ ပထမ ၃၀ ရက်ဟာကျနော့်အမြင်အရအခက်ခဲဆုံးဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့် ၁၅ ရက်ပဲဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ သင်ဟာနောက်ထပ်ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်သာသင်ထားနိုင်လျှင်သင်ဤဒုစရိုက်ကိုရိုက်နှက်ရာတွင်အလွန်ကြီးမားသောပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုလှမ်းနိုင်လိမ့်မည်။
ဒါဟာဆင်းအနာဆိုး: သင်ပြုပါ အမှန် သင့်ရဲ့ဒစ်သငျသညျကိုအုပ်စိုးဖို့လိုသလား? သင် ... လုပ်ပါသလား အမှန် အရေပြားနှင့်အားနည်းသောကြွက်သားတို့၏ ၅.၂ လက်မ (အရှည်ကွဲပြားမှု) သည်သင့်အပေါ်လွှမ်းမိုးရန်လိုသလား။ IS နှင့် ISN သည်မည်သည့်အတွက်အရေးကြီးသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်?
ခင်ဗျားကိုလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုပေးစေချင်တယ်။ fap-free day တစ်ခုစီရဲ့အဆုံးမှာ - မင်းကငါ့ ဦး နှောက်ကငါ့ရဲ့ဒစ်ကိုထိန်းချုပ်တယ်။
ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။ မိန်းမတွေမုန်းတဲ့ပုံစံကယောက်ျား - သူ့ပြproblemနာကဘာလဲ။ "သူကစဉ်းစားအားလုံးသည်လိင်ပါ! သူကငါနဲ့စကားမပြောဘူး သူ cuddle ပါဘူး! လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်အိပ်ပါ။ ” ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီပုံစံဟာ Askew ပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်ကွယ်မှာအမှန်တရားအချို့ရှိပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ penises အစေခံသောယောက်ျားဆက်ဆံရေးအတွက်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူမရဲ့လိုအပ်ချက်၊ ခံစားချက်၊ သူလိုချင်တာတွေကိုသူတို့မစဉ်းစားကြဘူး။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပါရစေ။ ငါလိင်ကိုချစ်တယ်။ ငါကပိုမကြာခဏငါကရထက်ချင်တယ်။ သို့သော်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများမရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးတွင်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်ကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်အားပြန်လည်လန်းဆန်းစေခဲ့သည်။ နောက်ယောက်ျားတစ်ယောက်လိုပဲငါလိင်လိုချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာငါ့လိင်တံရဲ့မောင်းနှင်မှုကိုမခံတော့ဘူး။ ငါအော်ဂဇင်ဖြစ်တဲ့အခါငါဆုံးဖြတ်ရတယ်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏ SO နှင့်ကျွန်ုပ်၏ဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုသိသာထင်ရှားစေသည်။ သူမငြီးငွေ့လာသောအခါငါနားလည်သည်။ သူမစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်တဲ့အခါငါကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ ငါတို့ပြောတယ် ကျနော်တို့ cuddle ။
ဒါဟာဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်မှန်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော့်မျိုးဆက်က porn ပေါ်မှာကြီးပြင်းလာတာပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှကြိုးစားပါ (ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်၎င်းကိုသတ္တိရှိရှိကြိုးပမ်းကြသည်) ကျွန်ုပ်တို့သည်အမျိုးသမီးများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသည်။ သူတို့ကိုစကားပြောများသောအဖြစ်များသည့်ရင်သားများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံဖြုန်းတီးလိုစိတ်ရှိသော်လည်း၎င်းသည်မလိုလားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် တစုံတခု ဆက်ဆံရေးထဲက (ဆိုလိုသည်မှာလိင်ပိုင်းလွှတ်ပေးရန်), နှင့်ပိုမိုမကြာခဏပိုကောင်း!
ငါသည်ငါ့ SO ကိုချစ်, ဤချစ်ခြင်းမေတ္တာငါ၏အကြီးမြတ်ဆုံးစကားရပ်ငါ့ကိုလက်ထပ်ဖို့သူမ၏တောင်းဆိုနေတာအတွက်မဟုတ်ခဲ့, မကျွန်မလစဉ်ပေးပို့သည့်ပန်းပွင့်ကိုမပွေ့ဖက်, အနမ်းများနှင့်ရယ်မော။ ငါသည်ငါ့ဒစ်နှင့်အတူစဉ်းစားရပ်တန့်, ငါ့စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့တွေးစတင်ခဲ့သည့်အခါငါ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၏အကြီးမားဆုံးသောအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။
မင်းလိုပဲငါသွားရန်မိုင်များစွာရှိသည်။ ငါလုပ်ဖို့အထိကြီးထွားလာအများကြီးရရှိပါသည်။ ရက်ပေါင်း ၉၀ သည်သင်၏အမှတ်တရများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုများအားလုံးပျောက်ကွယ်သွားသည်။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကငါတို့အတူတူပါပဲ။ လူကြီး၊ လူတွေကိုသူတို့ရဲ့အသားအရေ၊ အရိုးတွေ၊ လူလူချင်းတွေ၊ ထင်မြင်ယူဆချက်တွေရှိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလမ်းညွှန်ချက်ကိုခြေလှမ်းလှမ်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ PMO ဒုဥက္ကဌရာထူးမှနုတ်ထွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
တဖန်သင်တို့ကလုပ်နေလုပ်နေတယ်။ မင်းကိုဂုဏ်ယူတယ် မရပ်ပါနဲ့